“အခမဲ့´´ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » “အခမဲ့´´
Posted by ခင်ခ on Sep 5, 2013 in Creative Writing, My Dear Diary, Relationships & Family | 15 comments
အဲလိုမျိုးတွေကို ခြုံငြုံပြီးသုံးနှုန်းခေါ်တဲ့စကားရပ်လေးက “အခမဲ့´´ တဲ့။
ဘုန်းတော်ကြီးပညာသင်ကျောင်းမှာ စာသင်တဲ့ကလေးတွေအတွက် ဘုန်းတော်ကြီးတွေက အခမဲ့ ပညာ သင်ပေးတယ်။
ဆရာဝန်လေးက စမ်းသပ်ခမယူဘူး အခမဲ့ မေတ္တာနဲ့ကုပေးရှာတာ ဆေးဘိုးတောင် အမြတ်မတင်ရှာပါဘူးအေ။
ဇီဝိတဒါန မျက်စီဆေးရုံးက လူနာတွေကို အခမဲ့ မျက်စိစမ်းသပ်ပေးတယ်တော့။
နာရေးကူညီမှု့အသင်းက အခမဲ့ ပိုဆောင်ပေးတာလေ။
ဗြမ္မာစိုနာရေးကူညီမှုအသင်းက ဖွင့်ထားတဲ့ဆေးခန်းမှာ အခမဲ့ ရောဂါရှာဖွေစမ်းသပ်ပေးနေပါတယ်။
ကျောင်းဆရာမလေးက သူ့အိမ်အနီးနားက ကလေးတွေကို ညဖက်ကျရင် စေတနာနဲ့ စာအလကားပြပေးတယ် ပိုက်ဆံပေးလည်းမယူဘူး အခမဲ့ ပညာကုသိုလ်လုပ်တာတဲ့။
အဲဒီလိုအသံတွေမျိုး စာဖတ်သူတို့ ကြားဖူးကြမယ်ထင်ပါတယ်။
ဆေးရုံကြီးသွားပြတာ အခမဲ့မို့လားမသိဘူး ဆရာဝန်တွေက ၀တ်ကျေတန်းကျေဘဲ သူတို့ပိုက်ဆံယူတဲ့ အထူးကုဆေးခန်းတွေ ဆေးရုံတွေဆိုရင်တော့ ငွေမျက်နှာကြောင့်ရွှန်းရွှန်းကိုဝေလို့ ဂရုစိုက်လိုက်တာလဲ လွန်ပါရော။
ကျောင်းတုန်းက အိမ်ကသားတော်မောင်လေ ကျုပ်မိတ်ဆွေကျုရှင်ဆရာထံမှာ ကျုရှင်တတ်ခိုင်းတာ အလကား အခမဲ့သင်ရလို့လားမသိဘူး ဒီကောင် အလေးကိုမထားဘူး တစ်ခါတလေ အကြောင်းအမျိုးမျိုးပြပြီး ကျုရှင် မသွားချင်ဘူး ဘာဘူးမို့ ပြောဆိုနေရတာ ဟော အခုသူပိုက်ဆံနဲ့ပေးပြီး တက်ရတဲ့ ကွန်ပျုတာသင်တန်း မနက်အစောကြီးသွားရတာတောင် တစ်ရက်မပျက်ဘူးဗျ။
သမီးဒီမှာ သမီးကြိုက်တဲ့အရုပ်ကလေးလေ ဘီဒိုထဲသိမ်းထားပါလား ဟိုထားဒီထားနဲ့ ဖုန်တက်ပြီးမဲကုန်မှာပေါ့ အဲလိုဘဲ သူများဆီက အလကားအခမဲ့ရထားတော့ တန်းဖိုးမထားချင်ဘူး သူပိုက်ဆံနဲ့ဝယ်ရတဲ့ အင်္ကျီတစ်ထည် မတော်တော့လို့ ညီမလေးပေးလိုက်ပါလားဆိုတာကို မပေးဘူးလေ အ၀တ်ဘီဒိုထဲသော့ခတ်သိမ်းထားတယ်၊
ဒါကဘာကိုဆိုလိုကြတဲ့ စကားတွေလည်းဆိုတော့ တစ်ချို့က ကိုယ်ဆီက ပိုက်ဆံငွေကြေးတန်ဖိုး မကုန်ဘူး အလကားအခမဲ့ဆိုရင် တန်ဖိုးမထားတတ်ပုံကိုညွှန်ပြနေကြတာလေ။ လူဆိုတာလည်းခက်တော့ခက်သားလား တစ်ခါတစ်လေ မိမိငွေကြေးအကုန်အကျခံရ ပေးရရင်တော့ ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ် ဆုံးရှုံးမှာကိုနှမြောပြီး တန်ဖိုးထား တတ်ကြပေမယ့် အလကားအခမဲ့ဆို တန်ဖိုးမသိသလိုဖြစ်ပြီး တန်ဖိုးမထားတတ်ကြသလို သူများဆီက အခ ကြေးငွေ ယူပြီးလုပ်ပေးရတဲ့ ကိစ္စမျိုးကြတော့ ကိုယ်လုပ်ပေးလိုက်တဲ့အရာဟာ ငွေပေးရတဲ့သူအတွက် အဆင် မပြေမှု ဖြစ်ရင် ငွေယူပြီးတော့ဆိုတဲ့အမြင်နဲ့ ပြောကြပြုကြမှာကို မခံချင်ကြလေတော့ ဂရုတစ်စိုက်လုပ်ကြရင်း ငွေပေး ရရင်ကောင်းတယ် ငွေမပေးရတဲ့ အခမဲ့ ဆိုမကောင်းဘူးဆိုပြီး နှိုင်းယှဉ်ခံရတာမျိုးဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် စာဖတ်သူဆီက ဘယ်တုန်းကမှ သူ လုပ်ပေးခဲ့ရတာအတွက် အဖိုးအခတန်ကြေး မယူဘဲ မငြိုမငြင် အခမဲ့ လုပ်ပေးရှာတဲ့ သူမျိုး စာဖတ်သူတို့ ကြုံခဲ့ဘူးတာကို သတိထားမိလေလားမသိဘူးဗျ။
စာဖတ်သူကို ဗိုက်ထဲထဲ့လွယ်ကာ တစ်လမကနေရ သွားရပေမယ့် ဗိုက်လွယ်ခမတောင်းရှာဘူး အခမဲ့ ပါ။
စာဖတ်သူကို မွေးရတာနာကျင်ပေမယ့် သူ ပျော်ရွှင်ခဲ့တဲ့ အခမဲ့ ၀န်ဆောင်မှုသက်သက်။
စာဖတ်သူကို လူဘ၀လောကထဲကို ပို့ဆောင်မွေးဖွားပေးခဲ့တာလည်း အခမဲ့ ပါဘဲ။
စာဖတ်သူငယ်ငယ်က ချီပိုး ထိန်းကျောင်းပေးရလို့လည်း မငြိုမငြင်ခဲ့ဘူး သူလုပ်ပေးခဲ့တာ အခမဲ့ ပါ။
စာဖတ်သူကို နို့ချိုတိုက်ခဲ့ရတဲ့အတွက် သူ့နို့ဖိုးကိုလည်း ဘယ်တုန်းကမှမတောင်းခဲ့တဲ့ အခမဲ့ ပါ။
စာဖတ်သူ စားချင်တယ်ဘယ်လိုလုပ်ပေးဆိုလည်း သူ့ခမျာမမောမပန်း ချက်ပြုတ်စီမံလုပ်ပေးခဲ့တာလည်း အခမဲ့ ပါ။
စာဖတ်သူ ကျောင်းသွားဖို့အတွက် အ၀တ်အစားလျှော် မီးပူတိုက် စောစောထကာထမင်းချိုင့် လုပ်ခဲ့တာတွေ ကလည်း အခမဲ့ ပါဘဲ။
စာဖတ်သူတို့ အသက်အရွယ်ကြီးပေမယ့် သူဘက်ကလုပ်နိုင်တာလေးတွေ လုပ်ပေးနေရတာအတွက်လည်း အဖိုးအခဘယ်လောက်ပေးလို့ တန်ဘိုးမသင့်ရှာပါဘူး ဒါတွေလည်း အခမဲ့ ပါ။
စာဖတ်သူတို့ တစ်ခါတရံဖျားနာလို့ ပြုစုယုရ လူနာစောင့်ခဲ့ရတာတွေကလည်း သူက အခမဲ့ ၀န်ဆောင်မှုပါ။
စာဖတ်သူတို့ အိမ်ထောင်ပြုပြီး သားသမီးတွေရလို့ သူ့အနေနဲ့ ထိန်းကျောင်းပေးရ ဝေယျာဝစ္စလုပ်ပေးရရင် လည်း သူကတော့ မေတ္တာမပျက် အခမဲ့ ပါတဲ့။
ထိုထိုသော စဖတ်သူဘ၀တစ်လျှောက်လုံး ဘယ်အချိန်မှာဘဲဖြစ်ဖြစ် အခမဲ့ လုပ်ပေးတတ်သူကတော့ စာဖတ်သူ ရဲ့ “အမေ´´ ပါဘဲ။
အဲဒီ အမေရဲ့ အခမဲ့ လုပ်ပေးတာတွေဟာာ ငွေကြေးတန်ဖိုးမပေးရလို့ ကိုယ်အိတ်ထဲကအဿပြာ တစ်ပြား သား မှ မကုန်ခဲ့ မစိုက်ခဲ့ရလို့ ထို အခမဲ့ တန်ဖိုးကို တန်ဖိုးမထားတတ်သလိုများဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင် စာဖတ်သူ ပြန်ပြီး သေချာတွေး ရေးရေးပေါ်ဆိုသလို ပြန်စဉ်းစားပေးပါ အချိန်မလွန်မှီ သူ့ရဲ့ အခမဲ့ ဆိုပေမဲ့ အဲဒီ အခမဲ့ ဟာ အဖိုးမဖြတ်နိုင်လောက်တဲ့ အဖိုးမဖြတ်သင့်တဲ့ အဖိုးများစွာထိုက်တန်တဲ့ အခမဲ့ ဖြစ်တယ်ဆိုတာမို့ အကယ် လို့သာ စာဖတ်သူရဲ့ အမေ အသက်ရှင်လျှက်ရှိနေသေးရင်ဖြင့် အဖိုးဖြတ်မရတဲ့ သူရဲ့ အခမဲ့ တန်ဖိုးကို အသိ အမှတ်ပြုတဲ့စိတ်ရင်မှာနှစ်ပြီး “အမေ´´ လို့သာခေါ်လို့ တစ်ဖန်ပြန်လည် စာဖတ်သူတို့ အခမဲ့ လေးတွေ ပြုမူ ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်ဖြင့် သူ ရင်ထဲပိတိလွမ်းကာ ပျော်ရွှင်ဖွယ်ဖြစ်လာမှာ မလွဲဧကံပါလို့…………။
ခင်ခ မှ လူသားတွေအတွက် တန်ဖိုးအရှိဆုံး အခမဲ့ ပေးခဲ့သော အမေ များအားဂုဏ်ပြုစွာဖြင့် စာဖွဲ့ကာ ရေးသီ ခြင်းပါ။
( တွေးမိတဲ့ခဏ ရေးမိတာပ )
တန်ဖိုးဖြတ်မရလောက်အောင် အသုံးဝင်တယ် ဆိုတာလေး တွေးမိသွားတယ် ။
အခမဲ့ ဆိုလို့ 
မောင်အလင်းဆက်ကလည်း သူက သူတတ်တဲ့ ပညာဘဲ အခမဲ့ သင်ပေးမှာပေါ့။
အခြား စာရွက်စာတမ်းဖိုးတော့ ပေးရမှာပေါ့ဗျ။ ဟုတ်ဘူးလား။
ကျောက်စ်ကတော့ အခမဲ့ မေတ္တာကြွေးတွေကို တန်ဘိုးဖြတ်နေမိတာ နှစ်၂၀ ရှိပြီ ဆရာခရဲ့…
အဲသည့် အခမဲ့က အဘိုးအနဂ္ဂထိုက်တယ်လေ…. အိုမင်းလာလေ တန်ကြေးကြီးလေပဲ…
အခမဲ့ဆိုလို့ မှတ်မှတ်ရရ ကိုလေး ဆိုဖူးတဲ့ ခရိယာန် သီချင်းတပုဒ် ရှိတယ်ဗျ အမှတ်မမှားရင် အဲ့သည့်နာမည်လည်း အခမဲ့တဲ့…။
ခရစ်တော် အကြောင်းဖွဲ့ဆိုထားတာပါ .. ဘာတဲ့ …
….လူတွေကို သွေးနဲ့ ရွေးခဲ့တယ် တန်ဖိုးတော့ထားသင့်တယ်…။
ကော်ပီ သံစဉ်ခည ..သံစဉ်တူတာက ဂလေဟမ် ဆိုတဲ့ …
နှလုံးသားရှိတဲ့အရပ် ဆိုတဲ့ သီချင်း။
တကယ်တော် အခမဲ့တွေက တန်ကြေးပိုကြီးတာပါဗျာ။
အခုထိ အခမဲ့ဆဲပါ လေးခရေ…
မိဘပီသတဲ့ မိဘတွေနဲ့ တွေ့ရတာ ကိုယ့်ကိုကိုယ်ကံကောင်းတယ်လို့ မြင်မိတယ်..
ပို့စ်အတွက် ကျေးဇူးပါ လေးလေးရေ..
ဤလောကတွင်… တန်ဖိုးအကြီးဆုံးအရာများကို အခမဲ့ရပါသည်။
ကြုံဖူးကိုယ်တွေ့ စကားဝိုင်းထဲမှာ ပြောဖြစ်တာလေးကို ကွန်မင့်ပါရစေ
““ ကျွန်တော်ဟာ အဖ ဘုရားသခင် ကြောင့်မို့ချမ်းသာကျန်းမာ တာ တဲ့ ””
“ မင့် အဖ ဘုရားသခင် က ၊ မင့် ကို လူဖြစ်အောင် လုပ်ပေးတာမဟုတ်ဘူးကွ ၊ မင့် ကို လူဖြစ်အောင် မင့် အဖေ နဲ့မင့် အမေ နဲ့ ပေါင်း ၊ မင့် အမေ က မင်းဖြစ်လာမယ့် သန္ဓေကို ၉လလွယ် ၁၀လ ဖွားပြီး ၊ မင်း ကို အခု လို ဘုရားသခင်ရှိမှန်းသိအောင် ၊ ဘုရားသခင်ကို ကိုးကွယ်ရကောင်းမှန်းသိအောင် ၊ ကျွေးမွေးပြုစုစောင့်ရှောက် ပညာသင်ပေးခဲ့တာ ဘယ်သူက အရင်တုန်းကွ ”
တန်ဖိုးအရှိဆုံး အခမဲ့ ပေးခဲ့သော အမေ လွန်ခဲ့တဲ့ ( ၂၄ ) ရက်ကပဲ ဆုံးပါးသွားတယ်။ကျန်မောင်နှမ ( ၆ ) ယောက်လုံး ငိုကြ မျက်ရည်ကျကြတယ်။ အမေ့ အတွက် အခမဲ့ မျက်ရည်လေး တစက်တောင် ဒီနေ့အထိ ကျမလာသေးဘူး။ဘာဖြစ်မှန်းမသိ။
ကိုရဲရင့်လှိုင်အမေ ကောင်းရာမွန်ရာရောက်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးပါတယ်။
ဦးခပြောမှပြန်စဉ်းစားမိတာ.. ကိုယ်က လူတွေကို သေးငယ်တာရော..ကြီးမားတာရောပေ့ါ.. အကူအညီပေးခဲ့တာ… လက်ဆောင်ပေးခဲ့တာတွေအတွက် တုံ့ပြန်မှုတစ်ခုပြန်ရဖို့… မျှော်လင့်ချက်လုံးဝမရှိခဲ့တာသေချာပေမယ့်.. ကိုယ့်အတွက် သူများလုပ်ပေးလိုက်တဲ့အရာတစ်ခု.. ပေးလိုက်တဲ့အရာတစ်ခုအတွက်တော့ အမြဲအကြွေးတင်သလိုခံစားရပြီး အမြဲတမ်းတုံ့ပြန်လေ့ရှိတယ်.. သူတစ်ခါကျွေးထားရင် ကိုယ်တစ်ခါပြန်ကျွေးရမှ.. သူများလက်ဆောင်ပေးရင်..ကိုယ်ပြန်ပေးရမှ.. တစ်ခုခုကူညီရင်.. ကိုယ့်အလှည့်ပြန်လုပ်ပေးလိုက်ရမှ.. (အမျိုးတွေကများ.. ချစ်သူခင်သူတွေကများဆိုတော့ ..အဲဒီ အတင်မခံချင်တဲ့စိတ်ဓာတ်ကြောင့် ကုန်တာလည်းမနည်းဘူး )
ဒါပေမယ့် မိဘတွေကိုယ့်အပေါ်ပေးဆပ်ခဲ့တာတွေအတွက်တော့ တခါမှရေတွက်မထားမိဘူး…. ထပ်တူတုံ့ပြန်ဖို့လည်းမတွေးထားမိဘူး..
Crystalline ရေ အချိန်မှီသေးရင်ဖြင့်တွေးဆကာ မိဘတွေအတွက် တုန့်ပြန်မှု့လေးတော့ လုပ်ပါအုံးလို့